13 Izikolo eziPhezulu zeZonyango eziFundisa simahla i-2022
Kukho izikolo zonyango ezinemfundo yasimahla ekunokwenzeka ukuba ubungazi ukuba ikho. Kule nqaku, sixoxe ngezi zikolo zonyango zasimahla kunye nendlela abafundi abanomdla abanokuzifumana ngayo.
Iinkqubo zonyango ziyaziwa kuyo yonke indawo emhlabeni ukuba zixinzelelekile, zinzima, zinde, kwaye ngaphezu kwako konke, zibiza kakhulu. Ukufundisisa amayeza kunye neenkqubo ezinxulumene nayo naphina emhlabeni kuyabiza, le yinyani eqhelekileyo kwaye oku kukodwa kuye kwawakhubekisa amaphupha abafundi bezikolo eziphakamileyo abafuna ukuqhubeka babe ngoogqirha noogqirha.
Nokuba kunjalo, kuya kusiba lula kule mihla njengoko kukho izifundiswa kunye nezinye iindlela zoncedo lwezezimali ezivela kwimibutho eyahlukeneyo enje ngesiseko sokunceda kwaye ngamanye amaxesha kubantu abazizityebi. Ezi zezinye zamathuba ekuxoxwa ngawo kule posi yebhlog nanjengoko zikwangumnqweno wokubonelela ngezifundo zasimahla kwimfundo yakho yezonyango.
Kuya kuba yinto engakholelekiyo kwasekuqaleni ukwazi ukuba kukho izikolo zonyango ezinesifundo sasimahla, nangona kunjalo, njengoko uqhubeka ufunda uza kubona kwaye uqinisekise ukuba ayisiyonyani kodwa nawe unokuyifumana. Ke, ukuba uhlala ufuna ukulandela isidanga kwicandelo lezonyango kwaye awunakho ngenxa yeengxaki zemali, nali ithuba ongafanele uliphose.
Izikolo zonyango ezinesifundo sasimahla zinokuba kwifom yokufunda, izibonelelo, ubudlelwane, iibhasari, okanye nayiphi na enye indlela yoncedo lwezezimali. Kangangoko zinokusetyenziswa kwimfundo yakho yezonyango kwaye zicime izifundo zakho zonyaka, emibini, okanye ngaphezulu emva koko uya kuzifumana apha kwaye ube nakho ukuzifumana.
Kwakhona, la mathuba anokunikezelwa ziiyunivesithi okanye urhulumente welizwe, kwimeko apho kuphela ngabafundi baloo yunivesithi okanye abemi belo lizwe abanokufumana. Nangona kunjalo, abanye bayaqhubeka nokwandisa abafundi bamanye amazwe, nabani na olungele naliphi na kula mathuba aya kuchazwa ngokufanelekileyo ngenjongo yokucaca.
Ngaphandle kokuqhubela phambili, masiqhubeke nomxholo ophambili, unokufuna ukusebenzisa itafile yemixholo engezantsi ukuhamba kweli nqaku.
Yintoni iSikolo sezoNyango?
Isikolo sezonyango okanye i-med yesikolo-njengoko kuqhele ukubhekiswa kuso-liziko lemfundo eliphezulu elifundisa amayeza, ukuxhobisa izakhono kubafundi, nokubanika isidanga sobungcali ukubenza bakulungele ukuziqhelanisa nomsebenzi kwicandelo labo lonyango abalikhethileyo.
Ngaba zikhona izikolo zonyango ezinemfundo yasimahla?
Izikolo zonyango ezinesifundo sasimahla zixoxiwe kwaye zachazwa kweli nqaku, ewe, zikhona, kwaye ngolwazi olwaneleyo, nawe ungabhalisa kwesinye sezikolo zonyango simahla ukulandela inkqubo yezonyango oyikhethileyo.
1 Yintoni iSikolo sezoNyango?
2 Ngaba zikhona izikolo zonyango ezinemfundo yasimahla?
3 Izikolo zeZonyango eziGqwesileyo eziSimahla
3.1 1. KwiYunivesithi yaseNew York iGrossman School of Medicine
3.2 2. IYunivesithi yaseBergen
3.3 3. IYunivesithi yasimahla yaseBerlin
3.4 4. Ikholeji yeVagelos yoGqirha noGqirha
3.5 5. IKaiser Permanente Bernard J. Tyson yeSikolo sezoNyango
3.6 6. UJoan noStanford I. Weill Medical College
3.7 7. Cleveland Clinic Lerner College of Medicine (CCLCM) usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
3.8 8. IYunivesithi yobuGcisa yaseMunich
3.9 9. IYunivesithi yaseUmea
3.10 10. IKing Saud University College of Medicine
3.11 11. IYunivesithi yezoNyango yaseVienna
3.12 12. IYunivesithi yasePoznan yeSayensi yezoNyango
3.13 13. Isikolo seYunivesithi yaseWashington seYunivesithi
4 Izikolo zonyango eYurophu ezinesifundo sasimahla
5 I-FAQs kwiZikolo zezoNyango zaSimahla eziFundiswa simahla
Izikolo zeZonyango eziGqwesileyo eziSimahla
Apha, izikolo zonyango ezinezifundo zasimahla zidwelisiwe kwaye zaxoxwa, amakhonkco anikezelweyo ukuze ukwazi ukufunda iinkcukacha ezithe kratya malunga nendlela yokwenza isicelo senkqubo yezonyango oyikhethileyo, umhla wokugqibela wesicelo, iimfuno zokufaneleka, kunye nokunye.
Izikolo zonyango ezinesifundo sasimahla zezi:
IYunivesithi yaseNew York iGrossman School of Medicine
IYunivesithi yamahhala eBerlin
IVagelos College yoGqirha noGqirha
UKaiser Permanente Bernard J. Tyson weSikolo sezoNyango
UJoan kunye noStanford I. Weill Medical College
Iklinikhi yaseCleveland Lerner College of Medicine (CCLCM)
IYunivesithi yobuGcisa yaseMunich
IYunivesithi yaseKing Saud yeYunivesithi
IYunivesithi yezoNyango yaseVienna
IYunivesithi yasePoznan yeSayensi yezoNyango
1. KwiYunivesithi yaseNew York iGrossman School of Medicine
I-NYU Grossman School of Medicine yayiliziko lokuqala ukuqala imfundo yasimahla yezonyango, yaqala eli nyathelo lokubonelela ngesikolo sonyango simahla kwi-2018 kwaye ezinye izikolo zalandela ngokufanayo. Yintoni eyenziwa yi-NYU kukuba ibonelela ngezifundo ezigcweleyo zokufunda kubafundi abakhoyo ngoku nabangenayo nokuba bayimfuneko okanye basekelezelwe.
Esi sisona sikolo sokuqala sonyango sokuqala sasimahla ukuqala e-US kwaye ngaphandle kwaso sihlala sibekwa phakathi kwezona zikolo ziphambili kwezonyango e-US nakwihlabathi. Ke, xa usenza isicelo senkqubo yonyango apha kwaye wamkelwe ufumana imfundo ekumgangatho wehlabathi kwezona ndawo zibalaseleyo zehlabathi kwaye ungahlawuli.
Ukungena kwinkqubo yezonyango kuya kufuneka ukwanelise iimfuno zokwamkelwa kunye nezinye eziya kukwenza ukuba ufaneleke ukuba ungahlawuliswa. Ikhonkco elingezantsi liza kuhlela zonke ezi zinto kuwe.
Iwebhusayithi yeSikolo esisemthethweni
2. IYunivesithi yaseBergen
I-Faculty of Medicine kwiYunivesithi yaseBergen, eNorway, yenye yezona zikolo ziphezulu zonyango kunye nokufundiswa kwamahhala. Uninzi, ukuba ayingabo bonke, izikolo zikarhulumente eNorway azikho ntlawulo kwaphela kubafundi bamazwe aphesheya kunye nabasekhaya ukuba bafunde nayiphi na inkqubo abayithandayo. Elo thuba linokusetyenziselwa ukufundisisa inkqubo yezonyango ebonisa umdla wakho okanye onomdla kuwo.
Nangona abafundi bengazukuhlawula zifundo kodwa kuya kufuneka bahlawule imali yesicelo kwaye babhathalele izibonelelo zabo zokuhlala. Kwakhona, icandelo lezamayeza libonelela ngezifundo kunye needigri kwi-bachelor, master's, nakwi-PhD amanqanaba okufunda.
3. IYunivesithi yasimahla yaseBerlin
IYunivesithi yasimahla yaseBerlin, njengoko igama lisitsho, eneneni sisifundo sasimahla, eyunivesithi ekumgangatho wehlabathi yophando eBerlin, eJamani ebonelela ngemfundo yasimahla kuzo zonke iikhosi zabafundi bamazwe aphesheya kunye nabasekhaya abafuna ukwenza isidanga esikolweni. Sisinye sezikolo zonyango esinemfundo yasimahla kwaye ungasebenzisa izibonelelo zasimahla zeziko ukulandela isidanga sonyango ngaphandle kwendleko.
Abafundi kwinkqubo yezonyango baya kuthathwa ngohambo lwemfundo yezonyango kwaye banikwe izidanga ezamkelweyo naphina emhlabeni.
4. IVagelos College yoGqirha nabaGqirha
Esi sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseColumbia kwaye esinye sezikolo kwizikolo zeli lizwe ukubonelela nge-100% exhaswa ngemali ngokupheleleyo ngabafundi bakhe bezonyango. Kwi-2017, iYunivesithi yaseColumbia yasungula isifundi esaziwa njengeNkqubo yeVagelos Scholarship kwaye inikwa abafundi ababonisa iimfuno zemali.
Inkqubo yokufunda ifundela abafundi abatsha nabaqhubekayo beMD. Ukuqwalaselwa, abafundi baya kudinga ukungenisa izicelo zoncedo lwezezimali. Ukuba ufuna esinye sezikolo zonyango esinemfundo yasimahla kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukufaka isicelo kwiYunivesithi yaseColumbia kwaye ube sethubeni lokufumana iVagelos Scholarship Programme.
5. IKaiser Permanente Bernard J. Tyson yeSikolo sezoNyango
NgoFebruwari, 2019, iKaiser Permanente School of Medicine yabhengeza ukuba izakuqala ukugubungela izifundo kunye nemirhumo kwiiklasi zayo zokuqala ezintlanu zabafundi ukusuka ngo-2020 ukuya ku-2024. Isifundo sasimahla.
Oku kuyenza ukuba ibe sisinye sezikolo zonyango ezinesifundo sasimahla kwaye kuphela ngabafundi abangama-48 abaya kuqwalaselwa xa kurhoxiswa izifundo. Uya kudinga ukwenza isicelo kwangoko kwaye ube nokusebenza ngokugqwesileyo okunokwenza ukuba iziko likuqwalasele.
6. UJoan noStanford I. Weill Medical College
Esi sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseCornell, iyunivesithi ye-Ivy League, kwaye yaziwa njenge-Weil Cornell Medicine, esinye sezona zikolo ziphezulu zonyango ezinemfundo yasimahla, esekwe kwi-1898 njengeyunithi yophando lwezonyango. Ikholeji kutshanje ijoyine uluhlu lwezikolo zezonyango zasimahla kwaye inikezela ngezifundo zasimahla ngendlela eyahlukileyo.
Isikolo sezonyango saseCornel sibonelela ngezifundo zasimahla zemboleko kubafundi ababonakalise ukuba bafuna uncedo lwezemali kwaye ukuba uyafaneleka, uya kuqala ukufumana uthotho lwezifundo zokugubungela imfundo yakho yezonyango kunyaka wakho wokuqala. Ukongeza, abafundi abalandela izidanga ezimbini ze-MD kunye ne-PhD banokufumana izifundo ezizeleyo kunye nemigqaliselo yokuhlawulela iindleko zabo zokuphila esikolweni nakwiziko lezeMpilo leSizwe.
Nangona kunjalo, ukuba awulungelanga ukufumana inkxaso-mali esekwe kwiimfuno usenganciphisa iindleko zezifundo zakho ngokuzibandakanya kwimisebenzi yekharityhulam enikezelwa sisikolo enje ngenkonzo yoluntu.
7. Cleveland Clinic Lerner College of Medicine (CCLCM) usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Ifumaneka eCleveland, e-USA kwaye yasekwa ngo-1843, i-CCLCM yinkqubo yeCase Western Reserve University School of Medicine, ebise Cleveland, eOhio, United States. Ngo-2008, i-CCLCM yaqala ukubonelela ngemfundo yasimahla kubafundi ukuze bahlawule imfundo yabo yezonyango.
Qho ngonyaka, abantu abayi-2,000 32 abakhuphisana kwiindawo ezingafundiswanga kodwa kuphela ngabantu abangama-XNUMX abahlala bethathwa. Injongo yemfundo yezonyango yasimahla kukukhulula abafundi kuxinzelelo lokuhlawula iindleko zonyango zonyango kwaye endaweni yoko bajongane nezifundo zabo kwaye baqhubeke nonyango olujolise kwizifundo nakwezophando abazithandayo.
8. IYunivesithi yobuGcisa yaseMunich
Eli liziko elidumileyo lemfundo ephakamileyo eJamani enika uluhlu lweenkqubo kwiindawo zobunjineli, amayeza, ishishini, kunye nokunye. Apha, abafundi abayi kudinga ukukhathazeka ngokuhlawula iifizi kwimfundo yabo yezonyango njengoko ibonelela ngemfundo yasimahla kubafundi bamanye amazwe nabasekhaya.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka uhlawule isemester eyi- $ 127 kwaye uhlawule iindleko zakho zokuphila. Ngokwenyani, iyunivesithi ibonelela ngemfundo yasimahla kwizifundo ezininzi ngaphandle kwenkqubo ye-MBA. Abafundi bezonyango banokusebenzisa oku ukuze bafumane ithuba lokulandela isidanga kuwo nawuphi na umhlaba.
Ke, ukuba ujonga kwizikolo zonyango ezinesifundo sasimahla unokufuna ukuqaphela iYunivesithi yobuGcisa yaseMunich.
9. IYunivesithi yaseUmea
IYunivesithi yaseUmea ikwiSweden kwaye njengayo yonke iyunivesithi yesiqhelo ineFakhalthi yoNyango ebandakanyeka kwimfundo nophando kwicandelo lamayeza, i-odontology, kunye nokhathalelo lwempilo. Le yunivesithi ibonelela ngemfundo engafundiswanga kwaye singathi sesinye sezikolo zonyango esinokufunda simahla njengoko ungayisebenzisa kwimfundo yakho yezonyango kwiFakhalthi yezoNyango yeyunivesithi.
Imfundo yasimahla yokufunda isebenza kuphela kubafundi abavela kumazwe e-EU nakwi-EEA kwaye isenokungabi lolona khetho lufanelekileyo kubafundi bamanye amazwe njengoko uza kuchitha malunga ne- $ 3,500 ngonyaka kwinkqubo enye.
10. IKing Saud University College of Medicine
I-King Saud University College of Medicine yasekwa kwi-1967 njengekholeji yokuqala yezonyango eSaudi Arabia, sesinye sezikolo zonyango ezinemfundo yasimahla. Ngaphandle kokuchitha imali kwiindleko zokuphila, isikolo sigubungela izifundo zakho kwaye sinika nemivuzo kubafundi kuyo yonke imfundo yabo.
Isikolo sezonyango samkela abafundi abavela kwihlabathi liphela abafake izicelo kwinkqubo yabo yezonyango. ISaudi Arabia lilizwe labantu abahlukeneyo abanemvelaphi eyahlukeneyo yenkcubeko, ukuya apha ukuya kufunda kuya kuba ngamava amnandi.
11. IYunivesithi yezoNyango yaseVienna
Ifumaneka eVienna, eOstriya kwaye yamkelwa njengesinye sezikolo zonyango ezinemfundo yasimahla, iYunivesithi yezoNyango yaseVienna yasekwa e2004 kwaye ngoku sesona sikolo sikhulu sonyango eOstriya. Eliziko ligxile kwiNyango yoLuntu kunye noDentistry
Abafundi abavela ngaphakathi kwi-EU baxolelwe ekuhlawuleni iifizi zokufunda ngelixa abafundi abangengabo be-EU bahlawuliswa kuphela ii-800 zama-Euro ngonyaka kwaye oko kusabiza kancinci xa kuthelekiswa nezinye izikolo ze-med. Kwakhona, abafaki-zicelo abanga-EU beza kwinkqubo yezonyango kuya kufuneka bangenise ileta yokwamkelwa evela kwisikolo sezonyango kwilizwe labo.
12. IYunivesithi yasePoznan yeSayensi yezoNyango
Le yunivesithi yodumo ePoland, ibalasele kwaye yenye yezona zinto zibalaseleyo elizweni. IPoland yaziwa ngemfundo ephantsi yokufunda, nokuba ezinye iiyunivesithi zikarhulumente zikhululekile kubemi bayo nakwabafundi abakumazwe e-EU nakwi-EAA.
Imfundo yezonyango apha ibalaseleyo kwaye ungasebenzisa imfundo yasimahla yesikolo ukuya kwimfundo yakho yezonyango kwaye ulandele isidanga kwicandelo lezonyango olikhethileyo. IYunivesithi yasePoznan yezeNzululwazi yezoNyango yenye yezona zikolo ziphambili zonyango ezinemfundo yasimahla kwaye nokuba awuphumi kumazwe e-EU okanye e-EAA, isifundo sisezantsi xa kuthelekiswa namanye amazwe.
13. Isikolo seYunivesithi yaseWashington seYunivesithi
Ukujoyina uluhlu lwezikolo zonyango kunye nezifundo zasimahla yiYunivesithi yaseWashington University of Medicine, le yunivesithi ephezulu eUnited States kwaye ukuba ufumene imfundo yasimahla yokufunda amayeza mahala apha, kufanele ukuba yeyona nto ilungileyo. Uya kufumana izakhono zonyango ezisemgangathweni kwesona sikolo sikumgangatho ophezulu kwihlabathi kwaye ngaphandle kwendleko kodwa kuya kufuneka ubhatale iindleko zakho zokuphila ezibiza kakhulu kwaye kuya kufuneka uyithathele ingqalelo le nto ngaphambi kokuba ufunde apha.
Ukuba awusifumenanga isifundo esiza kuyigubungela ngokupheleleyo imfundo yakho yezonyango, unokufumana inkxaso-mali ngokwengxenye kunye nezinye iindlela zoncedo lwezezimali. Iimali zokufunda zinikezelwa ngokusekelwe kumgangatho, isidingo, okanye zombini.
Izikolo zonyango eYurophu ezinesifundo sasimahla
Izikolo zonyango eYurophu ezinesifundo sasimahla zezi:
IYunivesithi yaseLund, eSweden
IKlinikhi yeCleveland iChelner yeKholeji yeMithi
IKaiser Permanente yeSikolo sezoNyango
IYunivesithi yaseBergen, eNorway
Ezi zizikolo zonyango ezinezifundo zasimahla eYurophu nakwihlabathi liphela, ezinye zazo zamkela abafundi bamanye amazwe ngelixa abanye bengenzi, cofa kwikhonkco elinikiweyo ukuze ufunde ngakumbi malunga neemfuno ezithile zenkqubo.
I-FAQs kwiZikolo zezoNyango zaSimahla eziFundiswa simahla
Sisiphi isikolo sezonyango esinika imfundo yasimahla?
Izikolo zonyango ezibonelela ngezifundo zasimahla zezi:
IYunivesithi yasimahla yaseBerlin
Isikolo seCornell's Medical
Isikolo seYunivesithi yaseNew York yezoNyango
IYunivesithi yezoNyango yaseVienna kunye nezinye ezininzi ezidwelisiweyo zaxoxwa kule posti yebhlog.
Ngaba kunokwenzeka ukukhwela ngokupheleleyo kwisikolo sezonyango?
Ngokuthi “ukhwele ngokupheleleyo” oko kuthetha ukuba isifundi esiya kugubungela konke ukufundisisa ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho esikolweni. Zimbalwa izikolo zonyango ezinezifundo zasimahla ezixoxwe kule posti yebhlog zibonelela ngokukhwela ngokupheleleyo kwisikolo sezonyango kwaye nawe unokuzifumana ukuba uyazanelisa iimfuno zokufaneleka ezihlala zinzima kakhulu kwaye zikhuphisana kakhulu.
Ngaba zikhona izikolo zonyango zasimahla?
Ewe zikhona izikolo zasimahla zonyango okanye izifundiswa kunye nezinye iindlela zoncedo lwezezimali eziyilelwe ukwenza iindleko zemfundo yakho yezonyango iphantsi.
Oku kuzisa isiphelo kwizikolo ezili-13 zezonyango eziphezulu ezinemfundo yasimahla kwaye ngethemba lokuba, kufanele ukuba zincedile ngandlela thile. Unokufuna kwakhona ukujonga ezi ngcebiso zingezantsi ukuze uqhubeke nokufunda phesheya amathuba.
Izikolo zezoNyango eMaryland
13 Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango eCuba
Izikolo zokuFundisa Simahla Scholarships epheleleyo IiYunivesithi eziFundayo eziNcinci Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship
ezona zikolo zisimahla zezonyangoIzikolo zonyango ezisimahlaIzikolo zonyango ezinemfundo ephantsikwizikolo zonyango ezisimahla
Post Previous:Imisebenzi ephezulu eli-13 engeyiyo eyoMzimba ehlawula kakuhle
Okulandelayo Post:Izikolo ezili-9 zokuCoca iiNja eFlorida